Doorashooyinka Guud oo ka bilowday Japan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Doorashooyinka Guud oo ka bilowday Japan
Doorashooyinka Guud oo ka bilowday Japan
Muqdisho(SONNA):–Waxaa dalka Jabaan ka bilowday cod bixinta Doorashada madaxtinimo ee dalkaasi,iyadoo Malaayin qof oo uu dhashay dalka Japan ay codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee dalkaasi oo ah mid laga soo horumariyay wakhtigii loo asteeyay.
Shinzo Abe oo ah Ra’iisul Wasaaraha Japan oo sannad kahor ku dhawaaqay doorashadani ayaa sheegay inuu doonayo in uu wax ka qabto dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee wadankaasi kadib markii la dareemay culeysyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee dhanka arrimaha dibadda.
Raiisul Wasaare Shinzo Abe oo markiisi afaraad u tartamaya xilkaasi ayaa waxaa uu balanqaaday in haddii la doorto uu la tacaali doona khatarta Nuclearka ee Japan ka soo wajaheyso dalka Kuuriyada Waqooyi, iyo in collaad dambe aysan sii socon doonin.
Waxaa la arkayay sanaadiiqda goobaha cod bixinta oo ay safaf dhaadheer ugu jiraan dadweynaha kuwaasi oo go’aan ka gaaraya mustaqbalkooda.
Inkastoo dadka odorosa arrimaha siyaasadd adalkaasi ay sheegayaan in taageerada Mr Abe ay hoos u sii dhacaysay sanadihii ugu dambeeyey ayaa hadana waxaa la hadal hayaa in uu ku guuleysan doono doorashada marka la fiiriyo qaabka ay wax u socdaan.
Next articleSafaaradda Suudaan oo sheegtay in ay Jaamacado ka furayso Soomaaliya